हर्क खनिए विनयमाथि : सोधे- यत्रो डर किन? - खबरम्यागजिन
Homeखबरहर्क खनिए विनयमाथि : सोधे- यत्रो डर किन?
‘सर्वोच्चले चार दिनभित्र अग्रिम जमानतको लागि उच्च न्यायलयमा याचिका दर्ता गर्ने समय दिएको छ। विमल गुरुङ पहाड आउनै सक्छन्। तर पुलिसले एयरपोर्टलाई छाउनीमा परिवर्तन गऱ्यो। यसले त बङ्गालमा गणतन्त्र छैन भन्ने कुरालाई नै पुष्टि गऱ्यो,’ हर्कले भने, ‘विमल कहीं जानै सक्छन्। विमल दार्जीलिङ जाँदा के आकास खस्छ? विनय तामाङ र बङ्गाल प्रशासनलाई यत्रो डर किन?’
हिजो जन आन्दोलन पार्टीका अध्यक्ष डा. हर्कबहादुर छेत्री चुनाउ प्रचार गरेर फर्किँदै थिए। उनी फाँसीदेवाबाट फर्किँदै गर्दा उनलाई बाटोमा नै पुलिसले रोक्यो।
‘पुलिसले मलाई रोकेर विमल गुरुङलाई लिन गएको हो भनेर प्रश्न गऱ्यो,’ हर्कबहादुर छेत्रीले एक संवाद माध्यमसित कुराकानी गर्दै सुनाए, ‘म पनि उम्मेदवार हुँ। म प्रचारप्रसार गरेर फर्किरहेको थिएँ।’
आधा घन्टापछि डा. छेत्रीले टीभीमा देखे। त्यतिबेलासम्म पुलिसले बाघडुगरा एयरपोर्ट छाउनीमा परिवर्तन गरिसकेको थियो। डा. हर्कलाई तब पो थाहा भयो, उनको गाडीसमेत रोकेर किन पुलिसले सोधीखोजी गरेको हो।
यस्तोमा विनय तामाङहरूले पहाडमा जुन गणतन्त्र र शान्तिको वकालत गरिरहेका छन्, त्यसको नमूना नै हिजोको घटना रहेको दाबी हर्कबहादुर छेत्रीको छ।
‘विनय तामाङ भन्छन्, विमल पहाड आए अशान्ति हुन्छ। त्यसो भए यो कस्तो शान्ति हो जहाँ एक व्यक्ति विमल गुरुङ जाँदै त्यत्रो अशान्ति हुने?,’ हर्कले भने, ‘मलाई त लाग्छ, यस्तो माहौलमा गणतन्त्रलाई बँचाइराख्न गाह्रो छ।’
पुलिसले दुइ व्यक्तिलाई जसरी पक्राउ गऱ्यो त्यसमा पनि डा. छेत्रीको आपत्ति देखियो। ‘जसलाई पक्रियो, उ कराउँदै थियो, दलसित मेरो कुनै सम्बन्ध छैन भन्दै। फेरि पनि पक्रियो,’ छेत्रीले भने, ‘पहाडमा गणतन्त्र छैन भन्ने प्रमाण त यही हो। सबै कुरा जनताले स्पष्ट देखिरहेका छन्। यस्तोमा विनय तामाङहरू पहाडमा शान्ति र गणतन्त्र छ भन्छन्, त्यो कस्तो गणतन्त्र र शान्ति हो सबैलाई थाहा छ।’
चुनावी राजनीतिमा आयो टर्निङ पोइन्ट : आरबी राईको समर्थन राजु विष्टलाई : विष्टले भने- ‘मेरो जित पक्का भयो’
फातसुङ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका रक्तरञ्जित सपनाहरुको कारुणिक र त्रासद अभिलेख हो-खगेन्द्र सङ्ग्रौला